Wakaaladda socdaalka iyo ka hor tagga ka ganacsiga bani’aadanka - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Kiis badan ee ka ganacsiga bani'aadanka oo soo baxaya. sawir: Sveriges Radio
Wakaaladda socdaalka iyo ka hor tagga ka ganacsiga bani’aadanka
La cusbooneeyay onsdag 6 december 2017 kl 12.56
La daabacay onsdag 6 december 2017 kl 08.52
Wakaaladda socdaalka ayay u soo baxayaan kiisas ka badan intii hore ee la xiriira ka ganacsiga bani’aadanka.
Kiisaska ayey barkood la xiriiraan ka ganicsiga oogada bani’aadanka ee dhanka galmada, sida ku cad baaris tira-koob oo ay arinkaa wakaaladdu ka sameeysay oo ay uga warrantay laanta idaacadda Sveriges Radio ee P1 barnaamijkeeda Kaliper.
Mid ka mid ah dadyoowga uu falka noocaasi ah la soo gudboonaaday ayaa ah gabar aannu u bixiney Adana.
–Waxaan ahaa 16 jir kolkii aan halka imid. Waxaan u haystay inaan tacliin iyo wax bilaabi doono, balse waxay noqotay wax aanan filayn iyo inaan jirkayga ka ganacsado.
Adana ayaa sheegtay in mid ka mid ah qaraabadeed uu keenay dalka Sweden. Hase yeeshee halkii ay tacliin ka aadi lahayd lagu khasbay in jirkeeda laga ganacsado, iyadoo loogu hanjabay in la dhibaateeyn doono iyada iyo hooyadeed oo ku sugneeyd dalkeedii. Adana waxay xasuusataa markii ugu horreeysay oo uu nin oogadeeda iibsaday.
–Wuxuu ninku igu sameeyay wax walba oo uu doonayay. Waxaan u noqday sidii adoon uu leeyahay oo kale. Xitaa haddii aan qayliyay xanuun dartii waxba kama aanu soo qaadin. Wuxuu doono ayuu igu sameeyay. Maadaama uu lacag igu bixiyay.
Wakaaladda socdaalka ayaa illaa iminka caddeeysay ku dhowaad 400 oo dhibbeneyaal ee dhammaan noocyada kala duwan ee ka ganacsiga oogada bani’aadanka, halka ey 170 kiisaskaa ka mid ahi yihiin ka ganacsiga galmada. Muddo saddex sannadood ay ka soo wareegtay waxey tiradaasi gaarsiisnayd ku dhowaad boqol kiis.
Kor u kaca kiisaska ayaa loo aaneyn karaa aqoonta dheeriga ah ee shaqaalaha wakaaladdu ey nasiibka u yeesheen iyo sidii ey ku ogaan lahaayeen cidda ay falalkaasi la soo gudboonaadaan.
Wakaaladda socdaalka ayaa ciidanka ammaanka u gudbin doonta dhammaan kiisaska la tuhun-san yahay iney raad ku leeyihiin ka ganacsiga bani’aadamka, waana fal laga helo dhammaan dalka baaxaddiisa, sida ay sheegtay Kajsa Törnqvist Netz.
-Nasiib-darro waxaa sii kordhaya da’yarta laga ganacsado, sida ay sheegtay. Waana mid lagu arkeyo dalka dhammaantii.
–Marar badan waxaa haweenkaa loo safriyaa magaalooyinka yaryar ee dalka.
Dadyoowga oogadooda laga ganacsado ee wakaaladda socdaalku tuhunka ka qabto waxey ka soo jeedaan waddammada ka bax-san EU. Waxaa marka la is weeydiin karaa baaxadda dadyoowgaasi haddii lagu daro waddammada EU.
Waxaa laga joogaa dhowr sannadood kolkii ay ciidanka ammaanku ku guuleeysteen inay Adana ka saaraan gacantii dembiileyaasha, iyadoona shan nin uu ku dhacay xukunka ka dhan ah ee ka ganacsiga oogada bani’aadanka. Adana ayaa ku guuleeystay wixii ka dambeeyay inay barato culuunta kalkaalisada caafimaad, isla-markaana qoys yagleesho. Hase yeeshee aanu weli xanuunkii ka bixin fikirkeeda.
–Weli dhibaatooyinkii aan soo maray ayaan ku fekeraa, inkastoo aan jeclaan lahaa inaan ka maarmo, sida ay sheegtay Adana oo 16 jir iyada oo ah lagu bilaabay in oogadeeda laga ganacsado.